Mazava tsara isika fanatitra isan-karazany ny manam-paharoa Direct mijery eny tontolo eny. Ny mijery eny tontolo eny natolotry ny antsika no weaved alalan'ny deft manokana, izay ho azo antoka fa izany no amin'ny feh amin'ny orinasa nametraka fitsipika. Ny nanolotra mijery eny tontolo eny tsy ampy amin'ny fepetra arahana samihafa. Ankoatra izany, ny sarobidy ny mpanjifa hahazo afaka mijery eny tontolo eny izany amintsika amin'ny fepetra arahana samy hafa amin'ny tena takatry ny vola vidiny.
Ny nahay ny vokatra ambony kalitao dia ahitana ny fitambarana Fibre irery ihany mijery eny tontolo eny. Ny nanolotra mijery eny tontolo eny no weaved amin'ny alalan'ny matihanina mahay mampiasa tsara indrindra ara-nofo tsara fa mitady avy amin'ny fahefana tena mpivarotra ny orinasa. Ary koa, ireo dia natao tamin'ny feh ny fenitra sy ny kalitao orinasa dia atao misy amin'ny samy hafa habe amin'ny antonony ny tahan'ny indrindra.
Ny vokatra dia tsara ho an'ny isan-karazany ny FRP Hull. Ny vokatra mahazatra ireo seza, ny rano tanky, fiara faritra, fitaovam-panorenana, ny fahadiovana entana, fitehirizana tanky sy ny sisa. Mivantana tsirairay mijery eny tontolo eny horonan-taratasy manify manarona ny shrinkage na nahatan-manify, dia nametraka ho boaty baoritra na nodorany tamin'ny pallet. Pallet tsirairay dia afaka niisa 48 na 64 horonana. Horonan-taratasy tsirairay vato marina no 15-18kg. Izany dia mety mampitombo lanja horonan-taratasy araka ny fepetra mpanjifa. Pallet niisa dia tsy ho ambony kokoa noho ny 2 sosona, baoritra dia tsy ho ambony kokoa noho ny 5 sosona.